Ekipa inona no manome vahana an'i canyon? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Ekipa bisikileta Canyon - fanontaniana mahazatra
Ekipa bisikileta Canyon - fanontaniana mahazatra
Ekipa inona no manome vahana an'i canyon?
hantsanaSRAM (namboarina ho toy nyhantsana// SRAM)diabisikileta matihaninaekipaizay mifaninana amin'ny fifaninanana hazakazaka bisikileta an-dàlam-behivavy, toa ny UCI Women World Tour. Ny lohatenySponsorsdiahantsanaBisikileta sy orinasa SRAM.
Fotoana hanaovana fitsangatsanganana bus miaraka amin'ny ekipa vehivavy Canyon SRAM, andao handeha. (mozika mitohy) (mandondona) Tsy mino aho hoe misy olona ao, fa mandondona aho sao sanatria. Eto dia manana ny faritra ipetrahana lehibe isika, izay manodidina ny enina monja no manana toerana ho an'ny mpamily enina.
Ity i Lars mpamily fiara fitateram-bahoaka izao. Tsara ny namelany anay hanao fitsidihana fiara fitateram-bahoaka amin'ny fotoana farany tsy misy fampandrenesana mialoha: Rehefa avy nitondra fiara alina alina avy tany Giro Rosa nankany Frantsa nankany La Courseby Le Tour De France, lehilahy tsara. Kiraro kely sy bitika.
Voalamina tsara ity bus ity ary be ny toerana fitahirizana. Andao hojerentsika ao anaty ny efi-tranony mahafinaritra, manomboka eto. Ah, efijery fahitalavitra, heveriko fa hiposaka ihany koa izy io, saingy tsy hitanjozotra miaraka aminy aho sao sanatria tsy azoko aforitra.
Lamba famaohana, oh tsia, flannel kely izy ireo. Rehefa tapitra ny hazakazaka dia tonga ny soigneur ary mahazo rano madio mangatsiaka sy mangatsiaka be izy ireo ary manosotra ny tavanao mba tsy ho maloto loatra ianao rehefa tsy maintsy mahazo ny lampihazo na rehefa tsy mila mihazakazaka aza. ny lampihazo. Fikitika mahafinaritra, fitaovam-pitaovana, mozika izay mozika.
Tsara, aforitra vao, alao indray. Manana kitapo miantsena eto izahay. Zavatra tsy kisendrasendra roa.
Ny mahavariana dia pataloha fohy fohy sy tariby mamehy izay tsy azo sintonina satria voafandrika ao ambadiky ny jiro izy io. Any amin'ity lafiny ity inona no ananantsika? Mbola misy servieta, kitapo fanasan-damba, lamba firakotra. Heveriko fa ho an'ny fanorana, mahafinaritra, ny zavatra rehetra tena mivalona milamina.
Inona no eto? Le Tour De Vin. (miteny amin'ny teny alemà) 'amin'ny bisikileta mamaky ny tanimboaloboka.' Toa fitsangatsanganana tsara izany.
Tena tokony hanao ilay dia aho. Canyon SRAM Racing, taratasy fametaka mangatsiaka sasany. Ah milay, na tsy milay be.
Izany dia ho sticker taorinan'ny fitsapana nandritra ny hazakazaka iray. Mahafinaritra, milay be, manontany tena aho hoe firazanana iza? Tohizo, inona no ato? Chamois crème, tena ilaina. Toa cramois chamois lafo vidy io.
Tsy misy olona maniry zavatra hafa ankoatry ny haitraitra ao anaty cramosy chamois, marina? ? Sasao lena, mamafa ny hetsika rehefa tsy afaka mandro ianao, tsara. Nilazana aho fa misy toerana fitehirizana ao ambanin'ireo seza rehetra ireo koa, saingy sarotra be ny mahazo azy, koa andao hiezaka ny lamba famaohana Team Busha hiaro ireo seza miloko volomparasy, tena tsara. Oh misy famatsian-tsakafo izay toa tsara.
Ka inona no ananantsika Buckwheat, izany dia buckwheat. Manana voanio, poti-boanio, voanjo, fangaro voa, tantely, hazelnut. Muesli, manga maina, vary.
Tsy fantatro akory izay? Vary mena, mamy, y mahasalama. Mahita voa chia aho, mm, mamy. Misy mahandro tsara an'ity ekipa ity dia heveriko fa toy ny goba tetris ny fahatsapako azy raha diso aho a, tsy te hamaky ny bisy aho.
Fanoharana mahafinaritra tokoa, omena ireo bera teddy ireo rehefa misoratra anarana amin'ny Women Tour of Britain. Heveriko fa misy 'hello'. Ity dia toa orsa yoga teddy.
Tena malefaka be izy amin'ny dingana Warwickshire. Jiro mamaky ho an'ny mpamily, mahafinaritra be. Ny trano fidiovana tena madio sy madio tokoa, na dia olona enina aza no mampiasa an'io ho an'ny duro iray manontolo, manaitra.
Tena milay koa izany. Ireo dia voninkazo podium avy ao amin'ny Duro, mbola ao anaty fitoerany, manandrana mitazona azy ireo ho velona. Akory ny hatsarany izao ho an'ny faritra an-dakozia, izay heveriko fa ny faritra tsara tarehy indrindra amin'ny trano rehetra, na dia ny RV aza.
Andeha hojerentsika izay ao anaty lalimoara toy ny gel SIS, hmm, ary sunscreen izay tena manandanja ihany koa. Inona ny tsiro, voaroy, citrus. Hmm, tsiro espresso avo roa heny, azo ampiharina foana izany.
Masinina kafe, ex koa Toa espresso io. Ny hitako mangatsiatsiaka dia ny fisian'ny kaopy porselana ary tsy misy kaopy fady mahatsiravina. Lehibe iray tsara koa, misy cappuccino mendrika ao.
Toa ny admin no misarika azy. Radio, penina, paingotra fiarovana, kasety. Natao hamehezana ny radio io.
Azo ampiasaina hamehezana ny mpandray radio anao eo amin'ny sofinao. Mety ho kasety fizio izany, heveriko, eny. Azonao atao koa ny mampiasa an'ity horonam-peo ity mba hitazonana ireo zavatra manan-danja tsy hivoaka. soraty eo amin'ny kasety ny lampihazo ary apetaho amin'ny tahonao io mba hahafantaranao izay hitranga amin'ny hazakazaka.
Pens, mazava ho azy, tena zava-dehibe. Cutlery, grater, ah izay mahafaly ahy izao. Mahafinaritra hatrany ny mahita grater mendrika ao an-dakozia.
Fatana, sa tsy izany? Eny, gazy, heveriko. Tsiambaratelo, hazavana voajanahary, tsara. Krosy chamois bebe kokoa, ao an-dakozia.
Tsy hampiasa izany tsy nahy ho an'ny sandwich misy anao aho, heveriko fa tsy izany. Menaka oliva, vinaingitra, zava-manitra. Heveriko fa izany no sintomin'ny zava-manitra, tsara.
Ooh, notapahiko indray ity, ho sahirana be aho. Oven. Vata fampangatsiahana.
Fridge, izao dia nilaza tamiko i Lars fa afaka mijery ao anaty vata fampangatsiahana aho. Hmm, sandwich, voaloboka, atody be dia be. Heveriko fa izany no muesli ho an'ny sakafo maraina rahampitso, Bircher muesli vonona.
Divay vitsivitsy, mety ho an'ny mpiasa izany. Tian'ny rehetra ny mahita hoe inona ireo mpamily matihanina no mihinana ny fiparitahan'ny Hazelnut, mahafinaritra. Kobaara misimisy kokoa, feno boaty ity bus ity.
Tsy mampino, toerana fitehirizana be loatra. Oh, mahafinaritra izany, koa aroloha kely raha sendra lozam-pifamoivoizana sy fiarovan-doha vaky. Nolazaina tamiko fa ity ilay paosy podium.
Raha te hiditra amin'ny lampihazo i Lars dia mihazakazaka mankeny amin'ny lampihazo i Lars miaraka amin'ity kitapo ity izay manana akanjo lava sy pataloha fohy madio. Izay rehetra ilainao dia mila milamina sy azo aseho amin'ny lampihazo, tena zava-dehibe. Toa izany ilay kitapo latsaka, tsy dia tsara loatra.
Ity misy ny kitapo fanampiana voalohany raha sanatria lavo ny mpitaingina, na raha lavo izy ireo. Manantena aho fa raha, fa tsy oviana. radio hazakazaka, izany angamba no singa fampidinana. kinesiology, kinegio tape, tena zava-dehibe. toa ny kabinetra SIS io. asidra amine amina rojo vy, fananganana proteinina. beta fuel Na inona na inona izany? Asidra amina amina manga kokoa, na dia misy tsirony grapefruit aza.
Betsaka isotonic hydro-tabs, gel voasarimakirana sy sokay, mamy. Miverina ao anaty bus indray aho izao, aiza no ipetrahan'ny ankizy milay? Milahatra daholo ny fiarovan-dohan'ireo mpamily, vonona rahampitso, andro fifaninanana. Voatonona daholo, izay karazana mangatsiatsiaka, milay be.
Ireto ny kitapo orana miditra ao anaty fiara rehefa avy ny orana. Misy lohahevitra samy hafa daholo, mahafinaritra be izany. Ka palitao sy akanjo lava, kiraro ary firakotra.
Elena, fiara voalohany, tena milamina izany. Oh ny lalana diso. Mazava ho azy fa ilay tompon-daka italiana teo aloha dia manana kitapo kiraro miloko tompon-daka nasionaly, milay be.
Kobaara misimisy kokoa, fitsangatsanganana hita any anaty vata, raha azo lazaina. Waffles, sakafo hazakazaka tena lehibe. Morbido dia midika hoe malefaka amin'ny alàlan'ny waffles italiana sy malefaka.
Ary miaraka amin'ny waffles dia misy syrup sy agave. Ity dia fitaovana iray fanampiny ka nisy olona nianjera tsy nahy ary nandriatra ba kiraro, Ireto ny kitapo fanoloana voatahiry ary mazava ho azy fa namboarina manokana daholo. Satria tsy maintsy mifanaraka ary manana tompon-daka nasionaly betsaka koa izy ireo. (miteny amin'ny teny alemà) Ka midika izany fa ny masaky ny sakafo maraina angamba no teny miharihary indrindra.
raharaha fitsangatsanganana bisikileta
Tahaka ny pulp, fa ity avy any Farro. Tsy fantatro izay atao hoe Farro, varimbazaha? varimbazaha, varimbazaha varimbazaha izany. Andao handeha, toerana fitehirizana ao ambadiky ny, fandroana, lakozia, fipetrahana, toerana fitahirizana saika na aiza na aiza.
Feno lalimoara mahafinaritra fotsiny ity bisy ity. Punch be dia be amin'ny toerana kely dia kely tokoa, tsapako. Misaotra betsaka Misaotra an'i Lars namela anay hahita ny bus-ny sy ny vintana tsara ho an'ireo zazavavy amin'ny hazakazany rahampitso ao amin'ny La Course.
Raha te hahita atiny fitateram-bisy bebe kokoa ianao dia tsindrio eto. Azafady mba omeo masika kely izahay ary hisoratra anarana.
Manao bisikileta tsara ve i Canyon?
Bisikileta Canyondia raisina ho toy ny safidy safidy tsara indrindra eny an-tsena, manolotra singa farany avo lenta kokoa noho ny ankamaroan'ny marika isaky ny teboka vidiny, amin'ny ankapobenynanaoazo atao noho ny maodely fivarotana mivantana an'ny marika alemana.
Ny lakileny dia ny mangataka amin'ireo mpamokatra sarimihetsika isaky ny nitifitra mba hahita ilay amerikana an-jatony dolara notifiriny ary mamaritra izany ho toy ny bisikileta ltrail mahatalanjona tsy misy bitsika fanampiny tsara vintana manana sombin-tsolika amin'ny endrik'ilay fork ansr suntour xcr aloha miaraka amin'ny 140mm Travel nanampy alohan'ny hidirantsika amin'ny masontsivana dia hiresaka antsipirian'ny sasany amin'ireo frame isika izao araka ny antenainao fa ho tsotra ihany ny endriny, saingy i Canyon dia nanamboatra lalana anatiny sy ivelany, ny tsipika aoriana dia ivelany, ary ny zavatra rehetra raha tsy izany dia miditra amin'ny rafitra. Zavatra iray tiako horesahina anefa dia ny mpitari-dalana ao an-damosin-damosina farany, izay voalohany akaiky ny fantsona lohan-doha, dia tena lavitra be ary mamorona tariby lehibe eo anoloana amin'ny bisikileta ankoatra ny fanaovana ny endriny. maranitra tsara dia be ny toerana ho an'ny kodiarana Wideear 2,6-inch ary ny endriny lalina dia toa masiaka.
Andao hiresaka momba ireo singa avelan'ny Stoik, ary zavatra iray azo antoka, ny famaritana ny hardtail vonona 1000trail izao dia tsy ho mora araka ny eritreretinao fa misy zavatra roa azonao atao angamba tadiavinao manavao zavatra iray, fantatrao fa ity no bisikiletanao tazominao vetivety, ny zavatra voalohany apetraky ny dropper dia ny manangom-bola ny Stoic 3 dia tsy tonga miaraka amina paosin-drakitra ary afaka mandeha ianao na aiza na aiza eo anelanelan'ny 100 sy 200 mahita zavatra toa izao angamba dia mihevitra ny vidin'ny bisikileta. Ankehitriny ny zavatra hafa izay mampiasa drivetrain 10-hafainganana Shimano Dior dia tsy misy maharatsy ny fananana volo miisa 10 fa tsy 11 na 12, fa ny kasety nolazain'izy ireo teto dia 11 ka hatramin'ny 42, izay ambaratonga kely kokoa noho ny maro ankehitriny? zavatra iray amin'ny bisikileta hafa izay tsy mila ovainao vetivety dia ny kodiaran'ity bisikileta ity dia tototry ny kodiarana lehibe izy io ary mitelina an'i Hans Domf ao aoriana izay karazana kodiarana haingana be sy mora tohina ary Mialoha an'i Maria eo alohan'izay, Samy mifangaro ao anaty fonenana malefaka sy marefo ary mifatotra amin'ny sisin'ny Toalex misy sakany anatiny 30 milimetatra. Hiresaka momba ireo kodiarana ireo isika ao aoriana amin'ny famerenana, saingy ny fananganana tsara dia tsara midika hoe mandroso ny geometry ny stoic 3 dia mahazo zoro lohan'ny 65 degre izao dia mitovy ny endriny ho an'ny maodely thestoic rehetra ary mitovy ny geometry misy azy ireo. ny zoro familiana amin'ny hardtails ary misy ny steeper kokoa, saingy tadidio ny famaritan'i canyon ny bisikileta fa tokony hanao zavatra isan-karazany, noho izany dia manana zoro lohan-doha izy io, noho izany ny fomba ofisialy iray dia ny zoro loha manao zavatra rehetra ataontsika miaraka aminy ny bisikileta rehetra dia hanana zoro seza 75 degre ary ny kinova 29er dia hisy telozoro aoriana 428-milimetatra ary raha misafidy habe iray miaraka amina andohalambo kodiarana 27.5-inch ianao dia hihena ho 418 milimetatra.
Ny elanelam-potoana fohy dia manomboka amin'ny 380 milimetatra, fa amin'ny t Ny faran'ny hafa kosa dia mivelatra hatrany amin'ny 505 milimetatra. Ity dia bisikileta fanandramana antonony ary mipetraka amin'ny 455 milimetatra izany ka bisikileta maro no sarotra dieny izao ary raha mankany amin'ny tranokalan'i Canyon ianao ary tadidio fa bisikileta fandefasana mailaka ity dia stoika roa ihany no ho hitako, ny voalohany dia ity stoika telo ambin'ny folo dolara amerikana ity ary milanja 32 kilao sy roa grama tsara, ampy izay ny momba ny haitao sy ny ampahany rehetra miaraka aminy, andao hiresaka ny fomba familiana misy anao, izany no pitsopitsony ho an'ny canyon stoic ny fomba hametahana tsara an'io zavatra io dia hardtail ka mora be nefa misy zavatra roa tonta holazaina, ny voalohany dia ny tabilao suntour dia tsy manana latabatra rivotra atolotra ao ambadiky ny rantsan'ny fork, ka noho izany fitsapana sy hadisoana kely, jereo ny nolazaiko hoe andrana an'habakabaka sy rivotra oh marani-tsaina marani-tsaina ka mora manodidina ny paompy tampoka dia nametraka azy io tamin'ny toerana tokony hisy azy, fa d efinitiv dingana iray io zavatra hafa manonona azy io miaraka aminy kodiarana sy rims lehibe ireo rims 30 milimetatra midadasika sy ireo kodiarana Schwalbe dia samagic mary eo aloha apetraho eo amin'ny lalan-kely izy ireo ary vonona ny handeha aloha ianao manana ity bisikileta ity mankany amin'ny tampon'ny fiakarana, inona izany? Sarotra izany, ka ny tiako holazaina dia mahatsapa tena mahomby. Tsy tiako raha manana sakany midadasika kokoa ny drivetrain satria kasety 11 ka hatramin'ny 42 izy io ary tsara ho antsika izany taloha, saingy heveriko fa isika fotsiny dia mieritreritra aho fa miaraka amin'ireo kasety Widerange izay malefaka kokoa, tsara izay ananantsika roa eo aloha.
Ity bisikileta ity dia dimy, noho izany indrindra, tsy mila derailleur fotsiny izy io, fa ho an'ny mpitaingina vaovao kosa, eny, tiako holazaina, indrindra rehefa manana fiakarana lehibe any amin'ny toerana ipetrahanao ianao rehefa misy mpitaingin-tsoavaly vaovao mahita fa te-ho lavitra ianao, ka ity mety ho zavatra tianao ampidirina amin'ny vidin'ny bisikileta, $ 100 iray hafa ho an'ny kasety misy paingotra lehibe kokoa, ny karazan'homètika an'ny canyon dia mandeha amin'ny lalana miaraka amin'ireo zavatra tsy dia maranitra ary tsy dia malemy rehefa manitsaka ity zavatra ity ianao tsy mahatsiaro tena ho hazakazaka an-dàlam-pandrosoana izy io, tsy isalasalana izany, fa azo antoka fa mihoatra lavitra noho ny zavatra toa ny mpamboly ary mieritreritra aho fa tena miankina amin'ny geometry ny bisikileta ity fahatongavana ity, mahatsiaro tena ho tendrombohitra mahazatra izany. bisikileta fa tsy zavatra mifantoka amin'ny firazanana fotsiny ka mety tsy misy mampihetsi-po fa hitondra anao hatrany an-tampon'ny fiakarana izany ary heveriko fa izany. Ny bisikileta dia ny famoahana anao any ivelany mba hiala voly any amin'ny faritra be havoana, lahatsoratra iray mitete dia mety hanampy mazava ho azy fa ny tiako holazaina dia toy ny 1100 hardtail tiako holazaina, inona no tadiavinao, tsy azonao ny zavatra rehetra, ka ny zavatra rehetra toa izao? sarotra izany, fantatrao fa tsy marina izany, um zavatra iray ihany no hilazako fa mahavariana ireo kodiarana ireo rehefa hidina, saingy azo antoka fa tsy manampy ireo bisikilety ireo satria teo amin'ny fiakarana izy ireo dia nihanika izahay ny làlan'ny afo dia tena tsapanao fa Inmolasse io, fantatrao fa tsy ilay zavatra mihodina haingana indrindra any, fa ny tiako holazaina dia hoe entina hamoahana anao any sy ho eny an-tampon'ny fiakarana an-tendrombohitra ary hifalifaly ity zavatra ity. ary azo antoka fa mahatratra ny tampon'ny fiakarana ianao, inona ny tantara, eny ny Canyon dia manangana ny Stoic ho toy ny hardtail mandroso, saingy milaza ihany koa izy ireo fa tsara amin'ny zavatra maro samihafa, manomboka amin'ny lalana mitaingina ka hatramin'ny fitsambikinana, no tiako holazaina dia karazan-javatra maro karazana ary eny amin'ny làlana dia mandeha tsara ny bisikileta amin'ny toerana maro ka raha tsy avo ny hafainganana dia tsy misy maharatsy ny geo metrie na ny Sun Tour fork izay horesahintsika avy eo, ny Ny fork dia niasa tsara tokoa, um, rehefa mihetsika haingana sy sarotra ny bisikileta dia tsy maharaka wi Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny latinaPejy misy rohin-drakitra tapakaDikanteny tokony homarinana avy amin'ny teny anglisyAmin'ny tenim-pirenena hafa , indrindra rehefa milamina ny any ambany dia hitako somary mafy ity Fork ity toa ny filazanao fa fampiatoana tsara io satria bisikileta 1100 cc sa hoy ianao? Fotoana fihenam-bidy io, ny tiako holazaina dia ny voalohany, mazava ho azy fa raha nitaingina fork farany ambony ianao, raha nitaingina zavatra toy ny fork R Fox na ny Z2 ianao dia tsy hoe tsy dia mora vidy kokoa noho ireo zavatra ireo ary tsara izany, mitondra anao hivoaka any ianao ary ho an'ny mpamily betsaka izay tsy hanakana azy ireo ilay mando dia noheveriko fa voafehy tsara ny fanaovana ny marina, lazaiko fa nisy fotoana nahatsapana ho kely kokoa noho ny tokony ho izy tiana, tsy nahatsapa izy io fa nanadino fotsiny ny lalany tamin'ny alàlan'ny fitetezana ny dia izay tsy mety nefa amin'ny ankapobeny tsy midika izany fa mitazona olona betsaka hiverina io marina, raha ny marina, na dia mampiasa lakile Allen ianao hampidinana an'ity lasely ity dia toa ny malefaka ihany ny tanjaky ny bisikileta, ambany kokoa ny tany, eny ary tsy dia mahagaga izany, raha ny marina, dia bisikileta izay tena tia an'io karazan-javatra io tokoa mahafinaritra ny sary sokitra amin'ireo hazo manana làlana izay nozahanay ireo bisikileta ireo ary namboarina vaovao Noho izany dia somary malama ianao ary mahatsapa fa eo amin'ny bisikileta haingam-pandeha ianao amin'ny alàlan'ny hazo dia haingana dia haingana ary ao anatin'io toe-javatra io dia midika izany fa nahafinaritra ahy be tamin'ny bisikileta tiako ny fampiatoana ny any aoriana sy ny freins tsara kokoa ary ny fantsom-piadiana lehibe kokoa rehefa fantatrao eny? Ataoko izany, saingy tsy mahazo an'izany aho amin'ny dolara iraika ambin'ny folo. Ka rehefa manana dolara iraika amby zato dolara aho dia mieritreritra fa faly be aho fa miresaka momba ireo singa ankehitriny.
Inona ny sasany amin'ireo zava-nisongadina tamin'ity fananganana spikes ity izay heveriko fa ho avo indrindra ho ahy? ny kodiarana sy ny kodiarana kombo hatrany am-piandohana ity zavatra ity dia miaraka amin'ireo rims Alex misy 30 milimetatra ny sakany anatiny misy be dia be ny bisikileta mora vidy miaraka amin'ireto kodiarana penny pinner kely ireto ary tsy tsara izany, tsy manome anao ny fanampiana ilainao, indrindra ho an'ny bisikileta toa ity izay afaka mandeha amin'ny fitsambikinana amin'ny loto, afaka mandany fotoana be dia be mamotipotika ny mponina amin'ny lalan'ny paompy ary ny kodiarana miaraka aminy dia tena schwabetires tena tsara, tsy mila manova azy ireo mandra-pahaalany ilay zavatra hafa, mimenomenona kely aho momba ny elanelam-pandehanan-tsambo hafainganam-pandeha 10 mety hoe mila manao squats sy lunges bebe kokoa fotsiny aho na zavatra hafa toa izany mazava ho azy fa somary ampitahaina amin'io zavatra kely io fa rehefa manindry ilay hoe dia miditra mahitsy amin'ny lalantsara ary tsy mbola nanana olana tamin'iny aho ka mieritreritra aho fa zavatra tsara hafa iray hafa momba ny inona amin'ireo zavatra tsy nahatonga anao ho mpankafy zavatra roa tsara ity rakipeo ity? Efa imbetsaka aho no nandinika an'ity, saingy mieritreritra aho fa ireo mpitaingina vaovao indrindra ireo izay te-hiakatra an-tampon'ny havoana dia tsy afaka mitaingina kasety misy faritra midadasika kokoa raha mividy ity bisikileta ity fotsiny ianao mba hifalifaliana Ny fananana ny lalan'ny paompy sy ny loto dia mitsambikina tsara, avy eo tiako holazaina hoe iza no tena miahy, fa ny elanelana lava kokoa kosa dia hanamora ny fiainanao ny hafa ny freins indray ny bisikileta mora vidy hafa miaraka amin'ny pad resin sy ny rotors izay miaraka aminy Pads mety, ianao fantaro fa mandany vola ireto zavatra ireto ary tsy maintsy manandrana mamonjy vola amin'ny vola fito hetsy ariary fotsiny izy ireo vao afaka misafidy tsara, nanandrana mafy aho fa ny zavatra kosa dia ny fanaovana frein no ataon'ireo padres resahina, azon'ny olona antoka fa mangina kokoa, azoko ilay izy ary tsy dia lafo izy ireo, saingy fanavaozana iray hafa mety ho tianao hatao amin'ny karazana valizy vy hafa ity sns. Rotors isan-karazany, dolara iraika ambin'ny folo dolara, io no bisikileta mora indrindra ananantsika eto Sarah, saingy tsy midika akory izany fa soatoavina tsara ny fidirana amin'ny kodiarana sy ny fanovana noresahiko, ny lafo indrindra dia ny vongan-drano. Heveriko fa tsy maintsy ho hitako manokana ity raha afaka mahita dropperposts an-tserasera eo anelanelan'ny 100 sy 200 miankina amin'ny fanapahan-kevitrao ka aleo antsointsika hoe $ 150 ho an'ilay zavatra hafa tadiavinao hanana cartridge hafa aho ao ambadika, momba ny iray hafa dolara zato ho an'ny kasety be dia be ary izany dia mahazo ny bisikileta hatramin'ny 1,350 manome na maka kely miankina amin'ny toerana ahitanao ireo faritra ireo ary amin'ny marina rehefa manao ireo fanovana ireo ianao dia tsy dia mahita zavatra hafa loatra, inona no mila ovainao mieritreritra ianao fa ho faly amin'ny bisikileta ary ho eritreretiko fa ity zavatra ity dia sandan'ny vola mitombina.
Fotoana hiresahana momba ny mahatsara sy maharatsy azy. Andao atomboka amin'ny zavatra tsara. Eny, manomboka amin'ny zavatra tsara aloha isika ary ny zavatra lehibe ho ahy dia ny ahafahanao mahazo izany amin'ny tany milamina sy feno fanamby izay ahafahan'ny fahaiza-manao zoro sy paompy milalao.
Heveriko fa ity bisikileta kely ity dia fipoahana amin'ny toerana toy izao, ny tsy fisian'ny pipette p ankoatry ny tahan'ny fitaovana henjana sy ny freins mampiahiahy izay toa manjavona amin'ny zava-bitan'ny bisikileta amin'ny ankapobeny, izay midika hoe fahafinaretana, mihena ireo zavatra ireo ary ny bisikileta dia manararaotra fotoana fotsiny Ahoana ny momba ny zavatra sasany izay tsy mpankafy ity bisikileta ity, misy zavatra iray ihany eto, fantatrao fa tsy ny bisikileta ho anao izany raha mitady mafy ny sarotra ianao ary ny ankamaroan'ireo lalanao dia mideza sy marokoroko ary mahasosotra fantatrao fa sarotra ny fidirana an-tsokosoko saingy maimaim-poana ny géometry ary ny géometry dia afaka manao an'io bisikileta io ho afaka mahavita betsaka kokoa noho izy fa ny fomba mety terrain, izany ny bisikileta ho an'ny tany mendri-piderana, ho an'ny tany malama kokoa sy ho an'ny flowiertrailsall havanana, efa ho eo am-paran'ny farany hamintina hoe iza ity bisikileta ity, ka i Canyon no manangana an'io zavatra io? Vonona amin'ny zava-drehetra aho, manomboka amin'ny lalan'ny paompy ka hatrany amin'ny làlan-kaleha mankany amin'ny fitsambikinana maloto, mazava ho azy amin'ny antonony ary eny, tsy maintsy ekeko fa fipoahana amin'ireo zavatra rehetra ireo ny sarako ary ny sarahiko dia ambany noho ny vidin'ny bisikileta noho ny tim hortons ao iray volana ary mahasalama kokoa ho ahy io ary mahafinaritra be kokoa ny zavatra tokony hatsaraina ary azonao atao izany raha vonona ianao rehefa tonga any ary raha mitaky an'io ny tany, fa mandra-pahatongan'ny $ 1,100 dia tiako holazaina izany Sarotra amiko ny manome tsiny an'io zavatra io rehefa mitady bisikileta afaka mandeha bisikileta an-tendrombohitra fotsiny ianao. Ny Stoic 3 dia zony tsy voatery misafidy, izany dia ho an'ny stoic canyon verywhite 3. Heveriko fa fotoana tsara dia tsara ary asa tena tsara izany, misoratra anarana amin'ilay fantsona mba tsy halainao intsony ny hevitra momba ny dia bisikileta, satria mbola betsaka ny ho avy ary ho hitanay amin'ny manaraka ianao
Aiza no anaovana bisikileta Canyon?
uhm fantatrao fa niara-niasa tamin'i kenya aho ary tamin'ny bisikileta nahafinaritra ary tsara dia tsara tokoa aho fa tena faly sy nientanentana momba an'io fa ankehitriny dia manana vita amin'ny karbaona isika ka mampirehitra ny toetr'andro maharikoriko androany ka tena mety amin'ny fanadiovana ny garazy. miakatra sy hanomezana zazalahy kely ny lalan'ny fitsidihana kely dia ao anaty garazy kely izahay miaraka amin'ny moto rehetra azoko atomboka amin'ny bisikileta milahatra tsara daholo ny canyon eto dia fantatry ny vaovao rehetra izay tsara tarehy cool yeah eto isika manana .️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ Moto somary efa ela no nampiasako tamin'ny lahatsoratra teo aloha, ohatra ny thisoneum, ity no nampiasako tamin'ny lahatsoratr'i Escape2 mahafinaritra, dia eto ilay iray izay nampiasaina tao amin'ny Vimeoarticle sy izany tao anatin'ny herintaona Nahazo fomba fijery maherin'ny 120 tapitrisa, izay tena adala tanteraka ary eny 'ity misy iray hafa tena milay satria izy no bisikileta freeride an-tanàna voalohany nataoko.
Notifiriko tamin'ity iray ity ny lahatsoratro Empire Lift voalohany, avy eo azontsika teto ny canyon rehetra. Ity tokoa no zanako midina any ambany, eo anoloana sy aoriana izy 29er izay super kick super haingana ary toy izany rehefa midina ianao ary te-hitondra fiara haingana, io no bisikileta mety ho ahy miaraka amin'ireo faritra tsy mitombina rehetra avy amin'ny seza sqlabsignature ary eh ny fampiatoana ahy taloha sy ny sisin'ny Suisse, mba hahitsy araka ny tokony ho izy dia manana ny Torx aho manana toraka fotsy roa eto koa manana torolàlana hafa sy voasary iray koa aho, eh, volomboasary ao an-tranoko izay ampiasako ny lahatsoratra kianja filalaovana ho an'ny Myisraelis. Raha ny marina, ny tsela no mety ho bisikileta tiako indrindra nolalovako nandritra ny androm-piainako noho izany, ny bisikileta tsara indrindra ho an'ny freeriding dia ny ahafahanao manao zavatra ara-teknika izay mety tianao toy ny fitsambikinana goavambe izay mahavoa zavatra betsaka amin'ity bisikileta ity tena milay miaraka amin'ny faritra sonia rehetra ary avy eo izahay manana ny fampisehoana ary ny fananganana an'io spectral io dia mitovy amin'ny karazana trousyi sasany.
Tena nieritreritra ny hanamboatra bisikileta an-tendrombohitra izay nahatsapa ho bisikileta Atruss aho ary izany no antony nanandramako ity bisikileta ity ary nahazo lava tariby lava kokoa izahay mba hahafahako manao bara mihodina ary manana coaster maimaimpoana aza eto ary izahay ihany koa ny Maguria mt5brakes ny sonia sonia ary eh amin'ny endriny volamena mainty eto no ahitantsika ilay bisikileta e-bisikileta marary be io ilay bisikileta canyon dia bisikileta tena tsara tokoa, midika izany, vao azoko ilay tapa-bolana lasa izay ary tena mitaingina azy tokoa aho, ka eh, ity bisikileta ity dia mahatsiaro tena mangatsiatsiaka tokoa ary tsy tsapanao loatra ny lanjany, izay tiako holazaina fa tiako ny drafitry ny tongotra eo aminy ary efa nanao fitsambikinana vitsivitsy aho, noho izany dia tena marary tokoa izy io, miaraka amin'ireo faritra sonia rehetra, amin'ny ankapobeny dia mahafinaritra ny e-bisikileta. Ny tiako holazaina dia fantatro fa mety misy olona any mbola mankahala e-bisikileta, fa rehefa ianao, rehefa ianao? efa nanandrana bisikileta e-fantatrao hoe maninona aho no miteny fa tsara ary mahafinaritra ary um eto izahay manana zavatra toy ny bisikileta faran'izay miavaka vao hitako androany izay adala efa niandry azy elaela aho wum fantatrao aho Niara-niasa tamin'i kenya sy tamin'ny bisikileta voafantina ary tena tsara fa tena faly sy faly be aho nefa manana vita amin'ny karbaona isika izao ka ny canyon no nanampy ahy nanamboatra bisikileta misy ahy manokana ary eto izahay dia mbola tsy tena nitondra an'io , fa tena faly aho manandrana azy ary mahita ny fihetseham-pony. Raha ny marina dia ity no fiarovan-doha mena voalohany noraisiko.
Ny tiako holazaina dia mbola tadidiko ny andro nahalalako azy ary efa ho efa-taona izao, izay tena adala ny mieritreritra azy, dia nofinofy tamin'izany fotoana izany, eny, fiarovan-doha mena marobe, eh fiarovan-doha, namboarin'i fiarandalamby Daniel Helmund avy eo manana zazakely môtô roa aho, eh, bisikileta marary iray, izany eh, izany ny fandehanana maimaim-poana, eh, bisikileta faran'izay tsara, izany no bisikileta nahafinaritra indrindra efa nisy teny an-dalambe, mahafinaritra be eto amintsika ny ktm 250s ny sasany aminareo dia mety mahalala fa ny hazakazako dia hazakazaka motocross ary nihalehibe tamin'ny motocross aho rehefa nieritreritra aho fa enin-taona aho ary ahoana no mety ho faniriako fatratra an'i motocross nandritra ny fotoana rehetra ary avy eo fantatrareo fa ny bisikileta dia toy ny fanatanjahantena , mifandraika indrindra amin'ny motocross. Rehefa tsy afaka nitaingina motocross fotsiny aho dia tiako ny mandeha bisikileta, noho izany eny, saingy mbola tiako ihany ny mitaingina motocross indrisy fa tsy manam-potoana hitondrana be toy izany aho fa isaky ny mandeha aho dia eny an-dalana no mahavariana, Tena sarotra ho an'ity famolavolana fanao ity ihany, bisikileta tena alefa mba hidirantsika ao anatiny, manana bisikileta telo hafa ao izahay, izy rehetra dia samy manokana sy mihazona sary vitsivitsy momba izany, koa andao isika hanana bisikileta telo tena manokana eto. ity iray fantatrao angamba rehetra ity, ny bisikileta avy amin'ilay lahatsoratra mivantana mivantana an-tanàn-dehibe izay nataoko sary an-tsary tany Frantsa tany Paris sy ny menaka ary izany indrindra ilay bisikileta nataoko ho an'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako faha-25 taona nampiasana stair stumpit's insanely fa nanana kodiarana fisaka aho ary aoriana aho nametaka sombin-tsoroka mihitsy aza teny amin'ny anjarako mba hahazoana antoka fa tsy mikapoka ny lohako amin'ny stamina eo amin'ny kitapoko aho ary tapaka ny atody ary nahitana toe-javatra tena ratsy izany rehefa tonga teo amin'ny tohatra 25 aho, eny, eto isika ny toradroa canyon zavatra iray hafa nampiasako tamin'ny israeliko dia ny lahatsoratry ny kianja filalaovako eny th at dia nahafinaritra ny iray amin'ireo lahatsoratra mangatsiatsiaka indrindra nataoko ary nahagaga ny tontolo an-tany ka eh yeah tena milay ary io ihany koa ny lahatsoratra voalohany nataoko tamin'ny kenyan taloha dia soyeah dia traikefa nahafinaritra ary eto isika ny bisikiletako kenyanchoice voalohany dia io, izay nampiasako tao amin'ny lahatsoratry ny birao myhome ny aliminioma ary io no prototype voalohany nitovizantsika voalohany niaraka tamin'ny uhcanyon ka tena miavaka ary fantatrao ny safidy hananana bisikileta mametaka manokana ho an'ny Me building dia milay ary eny misaotra an'i Kenya fa nitranga izany ary izany no tena zava-drehetra avy amin'ny fitsangatsanganana garazy slash garazy manantena aho fa nankafizinao izany ary hahita anao amin'ny fifaliana manaraka.
Tsara kokoa noho ny manampahaizana manokana ve ny Trek?
Tena te hiaraka amiko miaraka amin'i Lycra izy, saingy voafandrika ao amin'ny fanjakana izy, nakatona ny sisin-tany Androany no antonony ny resaka, amin'ny alàlan'ny solosaina - Ny majika amin'ny internet, tena malahelo aho fa tsy manao ' manana an'i Lycra ary hiara-mandeha aminao miaraka amin'ny ala.- Hitsidika anao tsy ho ela aho Kazand ary hiara-mitaingina lycra kely isika. - Okay.
Tsy dia tsara daholo ny fidirana. Ny tiako holazaina dia hoe raha te handeha mitaingina soavaly aho Amin'ny elanelan'ny havoana iray kilaometatra, angamba ity no bisikileta nofidiko, fa tsy io no tiako indrindra, Ka i Sarah, izany dia mitarika amin'ny fanontaniana manaraka.
Amin'ireo bisikileta rehetra ireo, ny Lux no bisikiletanao malaza indrindra? - Ie. Ho an'ny zavatra roa. Heveriko fa tsy dia mavitrika loatra ilay fampiatoana, tsy nampiasa tsara ny dia lavitra 100 milimetatra.
Nahatsapa ho mikorontana aho isaky ny mandeha eo amin'ity bisikilety ity, toa tsy nisy nanara-maso ahy, nanana lava vodin-kazo io ary avy eo ilay fanidiana lockout niaraka tamin'ireo tsatokaty, (Mike Levy nifanaiky) mahasosotra ny mitondra azy. Eny, eny, heveriko fa ny Canyon Lux dia tsotra iray, izany ho ahy, fantatrao, tena tsy te handany fotoana bebe kokoa amin'ity bisikileta ity aho - ka Scalpel no tianao indrindra, ny Lux angamba no tianao indrindra, na ny tena tianao tsy tian'ny olona, ​​fa misy iray amin'ireo bisikileta tadiavinao handanianao fotoana bebe kokoa ve? Lazao fa mahatsapa ianao fa mahita an'izany, fa mila fotoana kely kokoa handrobohana tena ao? - Ie. Heveriko fa Epic manokana Tena faly aho ary mieritreritra aho fa satria nanao fitsapana miverina amin'ny hafa amin'ireo bisikileta hafa rehetra ireo dia mila fotoana kely kokoa fotsiny ny ati-doha (Mike Levy nifanaraka) mba ho zatra izany ary koa rehefa mitaingina azy ianao dia fantatrao fa mora kokoa ny zatra toy izay mitaingina bisikileta feno fampiatoana feno nentim-paharazana - ka i Sarah, ny Epic mifanohitra amin'ny scalpel, tsy dia lavitra ny isa geometrika, fa ny Epic kosa ity atidoha -Function, ilay karazana valizy tsy mety inertia amin'ny ankapobeny izay mahatonga azy hahatsapa ho hafa? - Ie, tiako ilay ati-doha izay tsy mila eritreretinao ary tsy tokony hampiasa hidin-trano mihitsy.
Bara fitantanana faran'izay madio. Ary avy eo, eny, rehefa tena reraka ianao, dia tsy te hieritreritra ny hamaha ny fampiatoana anao alohan'ny hidinananao amin'ny fidinana, zavatra ara-teknika iray, azo antoka fa tao anatin'ilay toe-javatra rehefa niakatra tampon-kavoana ianao ary avy eo adino ny mamoha azy ary avy eo amin'ny antsasaky ny havoana heverinao fa tena tsy dia mandeha amin'ny bisikiletako aho izay sarotra nitaingina mihitsy raha tsy mila mieritreritra momba azy ianao, tsara izany. Ka heveriko fa ny Brain manokana dia manao zavatra marobe ary manantena ny handany fotoana bebe kokoa amin'izany aho - iza no bisikileta haingam-pandeha indrindra amin'izany? Moa ve ianao mihevitra ny fahombiazany, mifototra amin'ny fitsapana fahombiazana ary ny fotoana fotoanao rehetra, izay no haingana indrindra? - Tamin'ny fitsapana fahombiazana, ny Canyon Lux no haingana indrindra tamin'ireo moto rehetra ireo.
Epic manokana dia miadana kokoa ny enina segondra mino aho raha mahatadidy tsara isika. - Yup, Yup - Ary noho izany tamin'ny fihetsiketsehana haingana dia nahaliana, satria nitovy tamin'ny namadika ilay zavatra manontolo. (Mike humy nifanaiky) Ka noho izany ny Canyon Lex no tena niadana indrindra tamin'ny filatsahan'ny fotoana, ary avy eo nahazo ny laharana faharoa ny Spécialiste, ary ny scalpel Cannondale no - eny - dia - eny - tena mavitrika tokoa, mamela heloka na iza na iza no haingana indrindra amin'ny fizahana andrana Rudy ara-teknika tena tsara.- Ie, heveriko fa ohatra tsara amin'ny fitsapana tontolo tena izy io, fantatrao fa ity Fireroad Climb ampiasaintsika amin'ny fitsapana fahombiazana ity dia tsy midika izany fa any ivelany no misy azy. , saingy tena tsy izy ary nandresy tamin'io fitsapana io.
Saingy amin'ny fotoana iainantsika na lalana iray sisa, dia sarotra io, malama. Tsy nandeha tsara izany. (Sarah hums nankasitraka) Eny - Ary noho izany ianao dia handany fotoana bebe kokoa amin'ny hazakazaka cross country, dia eo am-pelatananao - Marina - izany hoe, fantatrao, kely - Eny - sarotra kokoa - Izao ianao dia 'mila tena manana traikefa, ireto moto rehetra ireto dia namboarina ho bisikileta hazakazaka amboara eran-tany, aiza no ahitanao ny hoavin'izy ireo? Ohatra, mieritreritra ve ianao fa ny moto mamela heloka kokoa dia ny ho avy, fantatrao, posto seza vario sy zavatra toy izany? Toy ny hoe horesahina ilay sokajy Levy, saingy mieritreritra ve ianao fa misy zavatra sasantsasany amin'ireo bisikileta efatra ireo izay tena miavaka izay tena tianao, raha ny lalana aleha? - Fantatrao, ny Canyon sy ny Trek Supercaliber, mety ho hitantsika fa mahazo zoro fantsom-bolo somary fisaka kokoa izy ireo, somary tratra lavitra kokoa.
Saingy heveriko fa tsy hahita fiovana mahery vaika amin'ity sokajy ity isika satria mpanavakavaka. - Eny.- Fantatrao fa notsapaina sy notsapaina izy ireo, saingy ny tiako holazaina dia misy atleta an-taonina any izay minomino foana.
Raha nandresy tamin'ny môtô ianao dia tianao ilay izy - marina - hafa tanteraka? Ary na dia toy ny amin'ny hazakazaka fanombohana betsaka aza dia mbola mila izany fikirakirana mailaka izany ianao. Raha toa ianao ka olona 160 ao (Mike Levy no nifanaraka) tamin'ny hazakazaka sasany ho an'ny lehilahy, toy ny vehivavy 85 sy 100 eo amin'ny sehatry ny vehivavy, tokony ho afaka hamakivaky ny lalanao ianao, handray fanapahan-kevitra haingana, dia ianao fantaro fa ny bisikileta fohy kokoa dia ho tsara kokoa amin'izany. - Ka manana ny tianao indrindra izahay, ny tianao indrindra, tianao ny handany fotoana bebe kokoa aza, saingy nisy bisikileta nanaitra anao ve? Inona ny bisikileta noraisinao tamin'ny fiheverana vitsivitsy mialoha ary tena nahagaga anao anao rehefa nitaingina azy teny amin'ny làlana ianao? - Hoy aho hoe Cannondale Scalpel.
Tsy nanantena ny hiala tamin'ity aho ary ity (eken'ny Mike Levy) no bisikileta tiako indrindra. Ary avy eo ny tiako holazaina, amin'ny sokajy ary koa amin'ny ankapobeny, dia gaga aho fa nahatsapa ho nahazo aina toa ahy, fantatrao, ny manao ski amin'ny fidinana amin'ireo. Fantatrao, 10 taona lasa izay, rehefa nanao hazakazaka amoron-tsiraka aho, tsy nahatsapa ho nahazo aina tamin'ny fidinana (nihomehy i Mike Levy) - Fotoana samy hafa be izao - Tiako ny bisikileta samihafa, fohy kokoa.
Ary noho izany andao hijery ireo bisikileta ireo izao ary fantatrao, rehefa mitaingina bisikileta ianao na bisikileta enduro, dia mieritreritra ianao hoe, 'Phew, fantatrao fa isa misy daty ireo. 'Fa raha mijery bisikileta eny an-dàlambe ianao 10 taona lasa (Mike Levy nifanaraka) toy ny hoe tokony hisaron-damba sy lohalika feno toa azy isika. - Mahitsy? (mihomehy izy telo rehetra) - Mametraka ny fiainantsika amin'ny laharana isika.
Isaky ny mandeha izahay - Tena marina! - amin'ny hazakazaka. - Eny eny. Ka ireto bisikileta ireto dia mahazo aina kokoa fotsiny amin'ny maha-sokajy anao ary mifehy anao - Ka izany no ho adihevitra momba ny bisikileta hazakazaka an-tsaha amin'ny fitsapana an'i Kaz amin'ny bisikiletiko ary mieritreritra aho fa hiara-dia kely amin'ny tandem isika. .
Miaraka amin'i Kaz ve ianao? Hanana lycra aho-- - tsara izany amiko eo alohako. Nametraka lycra aho. (Mihomehy i Sarah) Eny ary.
Ny ankamaroan'ny faritra misy azy ireo dia nataon'ireo mpanamboatra azy ireo ihanybisikiletaho an'ny marika maro hafa. Mandra-pahatongan'ny vidiny mihoatra ny dolara an'arivony maro, nybisikiletadiatenasahala amin'ny vidiny mitovy amin'izanybisikiletaavy amin'ny mpifaninana rehetra aminy. Rehefa miakatra ny vidiny, dia misy fahasamihafana bebe kokoa eo amin'ireo marika.
Tsara kokoa noho ny Trek ve ny bisikileta Cannondale?
Raha manana torso lava ianao,Cannondale'sfantsona ambony mirona hihazakazaka somary lava kokoa ary mety mifanaraka kelytsara kokoa, Jowett nanoro hevitra. Mifanohitra amin'izany, torso fohy iray mety hifanarakatsara kokoamankany adiany. Ny kalitao farany sy ny ankapobeny dia azo ampitahaina. 'dianytena manolotra atsara kokoasanda amin'ny farany ambany.
Tsara kokoa noho ny an'ny goavambe ve ny bisikileta Trek?
Amin'ny ankapobeny,goavam-betsy dia lafonoho i Trek. Noho ny toerana nanamboarana azy ireo,goavam-bedia afaka mitazona ny vidinybisikiletaambany.Bisikileta mandehamanolotra mitaingina teti-bola ho an'ny teti-bola, fa nybisikileta, amin'ny salan'isa, lafo kokoa ny vidiny.
Mendrika ny vola ve ny bisikileta Trek?
diaFitsangantsanganana mendrika ny vola? Eny,Bisikileta mandehadiamendrika ny vola.dianymanangona teknolojia avo lenta ao aminybisikileta, manangana nybisikiletamanodidina ny frame aluminium sy karbonina avo lenta ary tsy mampiasa afa-tsy singa Shimano sy SRAM azo antoka.04/23/2021
Tompon'ny goavambe ve i Trek?
goavam-beno mpanamboatra bisikileta lehibe indrindra manerantany amin'ny fidiram-bola. Ny orinasa dia mivarotra bisikileta amin'ny anarany manokana ary manao azy ireo ho an'ny marika lehibe toy nydiany, Scott sy Colnago.
Iza ireo ekipa bisikileta tsy mendrika an'i Canyon DHB?
Tsy misy vokatra ao anaty harona. Irvine CX National: elite faha-3 U23 voalohany. Axel UCI 3 andro: dingana faha-4 4 10 GC. Fandresena amin'ny dingana 6 amin'ny fitsidihana eran-tany tanora atao hoe Assen
Iza no ao amin'ny ekipa hazakazaka junior an'ny pedalon Canyon?
Canyon dhb p / b Bloor Homes, Palmer Park Velo, Vision Innovative Leisure, Zappi Junior Race Team. PedalOn Canyon dhb p / b Bloor Homes, Palmer Park Velo, Vision Innovative Leisure, Zappi Junior Race Team. PedalOn
Firy ny mpitaingina an'i Canyon / SRAM Racing?
Miaraka amin'ny mpitaingina efatra ambin'ny folo avy amin'ny firenena sivy samy hafa, ny CANYON // SRAM Racing dia tranon'ny vondron'olona vehivavy fatra-paniry laza izaitsizy izay vonona hampiasa vola amin'ny ho aviny sy ny hoavin'ny bisikileta amin'ny alàlan'ny famakiana ny tany vaovao ary hatrany ny fanamby ny tenany sy ireo mpifaninana aminy. Ny ekipa ao ambadiky ny ekipa, miasa am-pitiavana ao ambadiky ny seho.